hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စွဲစေနှင့်ပိုက် Clamp > အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခြင်းစွဲစေ > hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ
အဆိုပါ hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ၏ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
ဦးဆောင်ချည်အတွင်းထိပုတ်ပါ-တူသောပုလွေအပြင်, တာစင်တာကိုလေ့ကျင့်ခန်း၏အစွန်အဖျားတူကြောင်းပဏာမလေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့ Flute အစွန်အဖျားလည်းဖြစ်ပါသည်, ဆိုလိုတာက self-တူးဖော်။ ဤရွေ့ကား screw နှစ်ခုတစ်ဦးတည်းသာမောင်းနှင်မှု (အစားသီးခြားတူးဖော်ခြင်း၏, နှိပ်ခြင်း, လှုပ်ရှားမှုကို install) ရွေ့လျားမှုသို့စိတျလှုပျရှားစရာကဲ့သို့အရေးယူမှုနှင့်ဆွဲထား installation ကိုသူ့ဟာသူပေါင်းစပ်; သူတို့စည်းဝေးခြင်းကိုလိုင်းများအနေဖြင့်အမိုးမိုးရန်, Hard-အလွှာ applications များအမျိုးမျိုးအတွက်အရှင်အလွန်ထိရောက်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, #4- ။ # 14,1 / 8--5 / 8 ''
13mm (1/2 & quote;) - 240mm (10 & quote;)
GB ကိုက ISO JIS ဘီ BA ဘွဲ့ ANSI Din
SPCC, SGCC, သံမဏိ, ကာဗွန်သံမဏိ, အပျော့စားသံမဏိ, လူမီနီယမ်, လူမီနီယမ်အလွိုင်းစသည်တို့ကို
1. Philips က 2. POZI 3. 4. ပေါင်းစပ် slotted
လွင်ပြင်, အဝါရောင်ဇင့်, အနက်ရောင်ဖော့စဖိတ်, မီးခိုးရောင်ဖော့စဖိတ်, နီကယ်များတွင်လည်းကောင်း
သငျသညျ ourproducts အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစား!
အဆိုပါ hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
တစ်ဦးအတော်များများ varities ရရှိနိုင်ပါသည်·, သတ်မှတ်ချက်တွင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်
ကုန်ပစ္စည်းများ Scope:စာရွက်သတ္တုလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ဆောက်လုပ်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲ, သတ္တုကက်ဘိနက်
အဆိုပါ hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
A. အအသေးစား box ကိုထုပ်ပိုး-သေးငယ်တဲ့သေတ္တာ (1000pcs / box ကို) + စက္ဏူထူ + အထပ်သား / သစ်သား pallet
ခအစုလိုက်ထုပ်ပိုး-ပလပ်စတစ်အိတ် + စက္ဏူထူ (20kg / ctn) + အထပ်သား / သစ်သား pallet
C. အပ်ချုပ်ဆိုင်လုပ် client ကိုရဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုအညီ
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း:DHL, UPS, TNT, Express, Fedex နှင့်အခြားသင်္ဘော
ငါတို့သည်သင်တို့၏နမူနာ get ပြီးနောက် 2), ငါတို့သည်သင်တို့၏အတည်ပြုချက်ကိုများအတွက်နမူနာမိတ္တူပေးလိမ့်မယ်။
ဖြေပြဿနာတွေ၏ဓါတ်ပုံများကို ယူ. ကျွန်တော်တို့ကိုအရည်အသွေးကိုစမ်းသပ်ရလဒ်နှင့် email များကိုပေးစွမ်းကျနော်တို့ပြဿနာတွေ comfirm ပြီးနောက်သုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်အတွင်း, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစိတ်ကျေနပ်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဖြေ 20-30 ရက်အတွင်းနမူနာအတည်ပြုချက်ကိုအပြီး။
A: ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်း၏။ ကျနော်တို့ OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
hot Tags:: hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်း, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality
hex အဝတ်လျှော်ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူhex ဌာနမှူး Phillips ကကိုယ်ပိုင်နှိပ်ဝက်အူ